Wararka - Codsiga Qolka Heerkulka iyo Uumiga Joogtada ah ee Caafimaadka iyo Caafimaadka
Codsiga Qolka Heerkulka iyo Uumiga Joogtada ah ee Caafimaadka iyo Caafimaadka
Waqtigan xaadirka ah, xaaladaha faafa ee qaybo kala duwan oo adduunka ah wali si buuxda looma xakamayn, waddamo iyo gobollo kala duwan iyo waaxaha caafimaadka iyo caafimaadka ee la xiriira iyo waaxaha baaritaanka ayaa sidoo kale qaadanaya istiraatiijiyado jawaab-celin firfircoon. kululeeyaha heerkulka joogtada ah waxaa si ballaaran loogu isticmaali karaa dhaqanka bakteeriyada caadiga ah iyo dhaqanka unugyada xiran ee shaybaarrada, waxayna muhiimad gaar ah u leeyihiin falanqaynta fayraska iyo horumarinta tallaalka, gaar ahaan la xiriira The pre-diirming of qalabka iyo reagents waxay si wax ku ool ah u wanaajin karaan waxtarka baaritaanka iyo baaritaanka. Nidaamka xakamaynta heerkulka laba-geesoodka ah, oo si weyn u hagaajinaya isku-dheelitirka heerkulka sanduuqa, heerka xakamaynta heerkulka wax ku oolka ahi waa + 5 ℃ -65 ℃; Habka xakamaynta PID, isbeddellada yaryar ee saxnaanta xakamaynta heerkulka, xaqiiji xakamaynta heerkulka saxda ah; korsado JAKEL taageere wareegga qulqulka tubbada, naqshad gaar ah ee marinka hawada, abuur wanaagsan wareegga hawada iyo qulqulka, iyo hubinta isku mid ahaanta heerkulka.
Qolka baaritaanka heerkulka joogtada ah iyo qoyaanka ayaa si sax ah u ekeysiin kara jawiga dabiiciga ah ee isku dhafan sida heerkulka hooseeya, heerkulka sare, heerkulka sare iyo qoyaanka badan, heerkulka hoose iyo huurka yar. Shaybaarka guud ahaan waxaa loo isticmaalaa dhaqanka dhirta, baaritaanka taranka; bakteeriyada, dhaqanka microbial, halsano, baaritaano heerkulka kala duwan oo joogto ah, tijaabooyinka deegaanka, falanqaynta biyaha, BOD, Go'aaminta, tijaabada denaturation ee qalabka dhaqanka microbial iyo keydinta dhaqanka dhexdhexaad, serum, daroogada, iwm. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa caafimaadka iyo caafimaadka, bayoolojiga , dawooyinka, cilmi baarista beeraha, ilaalinta deegaanka iyo cilmi baarisyo iyo dalabyo kale.
Waxa kale oo ay leedahay muuqaal tayo sare leh, dhalaalaya, baaxad ballaadhan oo aragti ah daaqad indho indhayn ballaaran, dhuumaha nidaamka qoyaanka iyo kala-soocidda xakamaynta wareegga, qaboojiyaha iyo nidaamka xakamaynta lagu kalsoon yahay. Intaas oo kaliya maahan, sanduuqa waxaa lagu farsameeyaa aaladda mashiinka xakamaynta tirada, laakiin sidoo kale waxay isticmaashaa suufka kuleylka kuleylka ee aadka u fiican si loo gaaro saameynta go'doominta heerkulka, si wax ku ool ah u yareyneysa heerka isbedbedelka heerkulka ee sanduuqa, iyo xiridda shaabadaynta silikoonka ka hortagga gabowga. shaabad caag ah.
Heerkulka joogtada ah iyo sanduuqa qoyaanka waxaa badanaa loo isticmaalaa beerista dhirta, taranka tijaabada ah, abuurista noolaha kala duwan, tijaabooyinka heerkulka kala duwan ee joogtada ah, tijaabooyinka deegaanka iyo shaybaarrada kale. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa daryeelka caafimaadka, biopharmaceutical, ilaalinta deegaanka iyo beeraha kale. Qalabka loo isticmaalo in lagu tijaabiyo waxqabadka maaddooyinka ku jira deegaanno kala duwan, tijaabiya qabowga, kuleylka, qalalan iyo caabbinta qoyan ee qalabka.